Phlizon 1000w COB Yakatungamirirwa Kukura Chiedza China Manufacturer
Tsanangudzo:Phlizon 1000w COB Inotungamirwa,Optic 1000w COB,Kukura kweMagetsi Mwenje COB Yakanyanya
 HomeProductsPH COB SeriesPH-B-L2Phlizon 1000w COB Yakatungamirirwa Kukura Chiedza
Phlizon 1000w COB Yakatungamirirwa Kukura Chiedza
Yakanakisisa COB Cree Yakatakurwa Kukura Chiedza 250W
Panzvimbo pekuve nemadhodhi madiki madiki, COB maitiro eAKO anokura mwenje kazhinji une chete mashoma emahombekombe COBs, imwe neimwe ine malenzi akasimba kutungamira iwo mwenje pasi mune chirimwa. Izvi zviri kukurumidza kuwedzera mukurumbira uye zvinozivikanwa nekupinda zvakadzika muchirimwa. 1000w 2000w 3000w cob hydroponic inotungamirwa inokura kureruka, yakazara kumeso .380nm-740nm, COB + Dual-chip, 3000K 5000K Cree COB CXA2530, CXB3590 uye Epistar dual-chip, yakanyanya kuenzanisira, yakakwira PPFD.
Vaviri vanotonhorera mafeni ane yakapetwa bhora (kuunzwa kubva kuJapan) uye yakakura yekupisa aluminium kunyura kudzivirira iwo kukura mwenje kubva pakakwirira tembiricha, kutonhora kwakanaka, refu lifespan.Photosynthesis uye kukurudzira hutano kukura budding uye inoyerera.
1000w / 2000w / 3000w COBled grow magetsi, ivo vachakupa zvimwe sarudzo apo zvidyarwa zvako zvinoda simba rakasiyana rekuvhenekera.
1000w 2000w 3000w 1500w akatungamira kukura mwenje Zvinyorwa
COB yakatevedzana, yakakwirira simba yakadhirowewa CREE COB ine yakakwira Par kukosha uye yakadzika kupinda mukati
Zviri nyore kuisa neminiti
Makore matatu Warranty
Enzanisa akatungamira kukura mwenje kune yetsika HPS / MH kukura mwenje
CHII CHINOTAURA ANOGADZIRA ISU YAKAKURA RUOKO?
2 .Actual Power: Nekuti iwo chaiwo masimba echiedza chirimwa chinosiyana nemamiriro akasiyana, vese vatengesi veAmazon vanoshandisa iro rakapihwa simba kurondedzera masimba echigadzirwa nekuti iro rakaganhurirwa simba rinogara riripo. Paunosarudza LED ichikura mwenje, iyo yakavharwa simba rechiedza chiratidzo, uye inonyanya kukosha isimba racho chairo.
3.Core Coverage: Pamusoro peiri pamusoro, paunosarudza chiedza chechirimwa, iwe zvakare unofanirwa kufananidza nzvimbo yekuvhara yemarambi akasiyana emuti, hongu, ukuru hwepakati yekuvhara nzvimbo. Kazhinji, mudanho rekumera, unogona kusungira iwo muti wechiedza kumusoro uye nzvimbo yekuvhara yakakura. In inoyerera chikamu unogona kuturika chirimwa chirimwa pazasi uye nzvimbo yevhavha idiki nekuti chirimwa chinoda yakawanda mwenje pachiyero ichi. Iwe unofanirwa kuenzanisa nzvimbo dzakasiyana dzekuvhara kusarudza iyo chirimwa chechiedza chinokodzera iwe.
Nzvimbo: Shamba, Ratidziro, Bindu, Imba, Urban, Bonsai, uye University Lab
Kukura Kwemichero, Miriwo, Maruva uye zvichingodaro
Seeding, Rooting, Kubereka, Kuruva uye Kubereka nguva
Phlizon COB yakatungamirwa ikure mwenje wandei, tinogona kukuudza kuti mwenje wedu weC OB unorova chero mwenje wakaenzana maererano nechinobuditsa uye kuwoneka.
Yedu cob inokura kureruka inoita mutengo wakawedzera zvishoma, asi iyo simba rekuwedzera uye zvirinani mhedzisiro inoonekwa inokupa iwe kupfuura yekugadzira iyo musiyano. Mazhinji evakuru rondedzero yemakanakisa e2000 LEDs uye emakanakisa COB maLEM.
Uye kunyangwe nemutengo wepamusoro, mwenje iyi ichiri mutengo nechepazasi yepamusoro zvigadzirwa.Our COB inotungamirwa mwenje mwenje inokoshesa kunyange nechepazasi pemhando yepamusoro yeBUDGET, seOpic.
yakagadzirwa mwenje yekukura, kumera mwenje, kumedza mwenje inotungamirwa, kutungamira kumedza mwenje, kumedza mwenje yezvirimwa, magetsi anotungamira anotungamira kukura, t5 inokura mwenje, chirimwa chirimwa magetsi, hydroponic inopa, yakazara mutsara inotungamirwa inokura mwenje, gadzira mwenje yezvidyarwa zvemukati, yakatungamirwa kumera, kudyara mwenje, kumera mwenje mwenje, kutungamira marambi emwenje, kumedza mwenje, kutungamira chirimwa, mukati memukati sakura mwenje, kumera kutungamira, mukati memukati memwenje marambi, kutungamirwa mwenje yekukura zvidyarwa, kukura rambi, kwakurisa kumedza mwenje, kutungamira mwenje yezvirimwa, kutungamira chirimwa gadzira mwenje, hps mwenje, fluorescent kukura mwenje, mazana matanhatu akatungamirwa kumera mwenje, cfl kukudza mwenje, kutungamira kukura mwenje mababu, chirimwa chirimwa, zvakachipa led akura mwenje, akatungamira kuwedzera kukura mwenje, yakachipa kukura mwenje , kukura midziyo, akatungamirira achikura, kukura zviedza kutengeswa, akaviga kukura zviedza, kukura Mabumba, kukura akatungamirira zviedza, indoor akatungamirira kukura zviedza, akatungamirira indoor kukura zviedza, akatungamirira kukura Mabumba, akatungamirira kukura chiedza Kits, pamusoro akatungamirira kukura chiedza s, kukura pamwe akatungamira mwenje, akatungamira kukura mwenje
Best COB Cree Yakakura Kukura 250W Bata Ikozvino
50w COB LED Kukura Chiedza 3500K / 5000K Bata Ikozvino
250W LED Kukura Chiedza CREE COB Bata Ikozvino
Phlizon Cob Yakatungamirwa Indoor Kura Chiedza Chakakwana Spectrum Bata Ikozvino
1000w Cob Yakasimba Yemukati Inotungamirwa Kukura Chiedza Bata Ikozvino
Phlizon 1000w COB Inotungamirwa
Optic 1000w COB
Kukura kweMagetsi Mwenje COB Yakanyanya
2000w Cob Inotungamirwa
Phlizon Cob Inotungamirwa Indoor
Phlizon 2000w Cob Yakatungamirwa Chiedza
Phlizon 2000W COB Kura Chiedza